आर्मी हेडक्वार्टरमा भारतीय राजदुत र कलाकारको अगाडि उपराष्ट्रपतिमाथि यस्तो हर्कत – YesKathmandu.com
हाम्रा देशका भिआइपिहरुलाई मर्यादा भनेको के हो कस्ले सिकाइदेला ? मर्यादाक्रम अनुसार देशकै दोश्रो ओहोदाक्रममा रहेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पछिल्लो समय विवादमा तानिएकाछन । निम्तो पाएको खण्डमा स्कूल/कलेजका कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै हिड्ने पुनलाई आर्मी अफिर्सस क्लवमा निम्तायो चौधरी समूहले ।विश्वकै अर्वपतिको सूचीमा दरिएका चौधरी गु्रपको निम्तो पाएपछाडि उपराष्ट्रपति पुन सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर लगाएर कार्यक्रमस्थलमा पुग्ने नै भए ।
तर कार्यक्रममा ‘बासी’ भइसकेको अर्थात अगाडि नै बजारमा आइसकेको पुस्तक पुन उपराष्ट्रपतिको हातबाट बिमोचन गराइयो । त्यो पनि साधरण मर्यादाक्रम समेत उल्लघन गर्दै । भारतीय राजदुतहरुकै लस्करमा राखेर पुनले पनि उक्त पुस्तकको बिमोचनमा सघाए ।
उपराष्ट्रपति भएपछि साझा छबी बनाएका नन्दबहादुर पुन चौधरी ग्रुपले प्रायोजन गरेको कार्यक्रममा मर्यादामा आँच आउने गरी प्रस्तुत भएपछि आलोचित भएका छन् । बुधबार उपराष्ट्रपति पुनकै लहरमा उभिएर भारतीय राजदुत, भारतीय कलाकार र व्यापारीले सँगै कितावको बिमोचन गरेका थिए । देशको दोस्रो बरियतामा रहेको सम्माननीय व्यक्तिलाई सहसचिवस्तरको राजदुत सरह प्रस्तुत गरिएको भन्दै आयोजकको आलोचना भएको छ ।
आयोजकलाई त भारतीय कलाकार र राजदुत भनेपछि उपराष्ट्रपति कोही होइन भनेजस्तो देखियो ।पुस्तक बिमोचन भनिएपनि सत्रुध्न सिंन्हाको बजारमा आइसकेको जीबनी बिमोचन गरिएको थियो । कितावको प्रचार गर्नका लागि स्टेज र उपराष्ट्रपतिको प्रयोग गरिएको प्रष्टै थियो ।
अहिले देशमा सिने अवार्ड बाड्ने लहडै चलेको छ । सरकार मातहतको चलचित्र विकास वोर्ड सहित नीजि क्षेत्रबाट समेत गरी नौ वटा संघर संस्थाले अर्वाड बाड्दै आएका छन । केही सिनेकर्मीहरुसँग पैसा असुल्दै अर्वाड थमाउने धन्दा चलिरहेकै समयमा निर्देशक दिनेश डिसीले समेत चौधरी गु्रपसँगको सहकार्यमा फिल्मी अर्वाड बाड्न थालेका हुन । सोही समारोहमा हो यस्तो लज्जाजनक दृश्य देखा परेको ।
One thought on “आर्मी हेडक्वार्टरमा भारतीय राजदुत र कलाकारको अगाडि उपराष्ट्रपतिमाथि यस्तो हर्कत”
why r u making such kind of news ….what kind of news portal is this ?why always negetive news are posted from this portal
प्रधानमन्त्रिले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई आन्दोलनमा नजान आग्रह गरे
दलित समुदायका कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू
जाजरकोट महामारीमा मृत्यु हुनेको संख्या १७ पुग्यो, २ हजारको ज्यान जोखिम्
बजेट अधिवेशन २३ बैसाखमा
अनौठो गठबन्धन ! वामशक्ति परास्त गर्ने काग्रेस र नयाँ शक्ति बीच तालमेल ?